Café ọnwụ - WRSP
Ọnwụ CAFÉ TIMELINE
2010: Ebube mbụ "Café Mortels" na Paris, nke onye mbido echiche a, bụ ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze bụ Dr. Bernard Crettaz duziri.
2011: Onye mbụ na-emepụta websaịtị Jon Underwood na onye ndụmọdụ Sue Barsky Reid nwere Café Ọnwụ mbụ na London. Weebụsaịtị ọnwụcafefe.com mechara bụrụ ihe enyemaka n'ịgbanwe Café ọnwụ ka ọ bụrụ ọgbakọ zuru ụwa ọnụ.
2012: Ebube Café mbụ nke US mere na Columbus, nke ndị ọkachamara na lizzy Miles na Maria Johnson haziri.
2017 (June 25): Jon Underwood nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri anọ na anọ. Ọnwụ Café gara n'ihu na-aga n'ihu.
2017: Ọnụọgụ ndị nwụrụ ọnwụ: ịgagharị ebe obibi ọnwụ e bipụtara.
2020: Emeela ihe Cafe ihe karịrị 10,441 Death Cafe na mba iri isii na itoolu, na kọntinent ọ bụla ma e wezụga Antarctica. Ebe mgbasa Cafés na-agbasa na United States, mgbasa ozi agbasawanye agbasawo.
Ọnwụ Café n'ụdị ya ugbu a bụ n'afọ 2004 na Neuchâtel, Switzerland, mgbe ọkà mmụta banyere mmekọrịta mmadụ na Switzerland na ọkà mmụta mmekọrịta mmadụ na ụwa, Bernard Crettaz [Ihe osise dị n'aka nri] nwere nke mbụ “Café Mortels.” Ka ọ na-erule oge Crettaz rụzuru ọrụ nhazi ya karịa ihe dịka Café Mortels iri anọ, nzukọ izizi weere ọnọdụ na Paris, France na 2010. Onye isi ala United Kingdom bụ Jon Underwood, onye nyocha ụlọ ntanetị nke Britain ma mesịa bụrụ onye ama ama n'ụwa niile na ngaghari Ọnwụ Café, tinyere ya. onye na - akpakọrịta psychotherapist na onye ndụmọdụ Sue Barsky Reid, na nne ya agụwo banyere ihe ọjọọ Crettaz ma bido Café Ọnwụ Mọnde nke mbụ na Septemba 2011. Lizzy Miles na Maria Johnson haziri ọgbakọ Café mbụ na Columbus, Ohio, United States of America. Gburugburu mba ndị ọzọ, ndị na-akwado ọnwụ gburu obodo ha emebere obodo ha iji sọpụrụ isi okwu ọnwụ Ọnwụ Café: Ọ dị mma ma gbasie ike itinye ọnụ na "okwu ọnwụ." Underwood nwụrụ n'ụzọ dị egwu na 2017, obere oge tupu ọrụ seminal ahụ Ọnụọgụ ndị nwụrụ ọnwụ: ịgagharị ebe obibi ọnwụ, bipụtara. Cafés Ọnwụ agbachabeghị ewu ewu n'agbanyeghị ọnwụ Underwood. N'ezie, Ọnwụ Café na-aga n'ihu na-eto eto ebe ugbu a ọtụtụ puku Ọnwụ Café gburugburu ụwa.
Dika ekwuputara na weebụsaịtị ya, ሞትcafe.com, Cafés na-anabata ndi mmadu, ha na abia ndi obia, ichikota iri achicha, teaua tea ma kwurita onwu. Ebumnuche nke Ọnwụ Cafés bụ ime ka mmadụ mara banyere ọnwụ site na okwu ọnwụ. Ọnwụ Cafés na-achọ inyere ndị mmadụ aka iji ndụ ha niile (njedebe). Emebeghi kọlọfụ ka ọ bụrụ otu usoro ọgwụgwọ nke ndị otu (ọ bụ ezie na ndị bịara ya na-enwekarị catharsis). Ihe di nkpa banyere isonye na nhazi nke anwu anwu bu na ndi agha aghaghi ịbịaru okwu banyere onwu n’enweghi ebumnuche, o nweghi ebumnuche (okwu onwu bu ihe emeghere mgbe nile ka ndi n’oru ihe Café) ma obu n’enweghi ochicho nke ego. N'akụkụ a, A na-enyefe Cafés ọnwụnwa na-akwụghị ụgwọ ma jigide ya ruo ebe dị mma, nkwanye ùgwù na nzuzo na-enweghị eburu ndị mmadụ gaa na nkwubi okwu, ngwaahịa, ma ọ bụ omume ọ bụla. N'agbanyeghị ụdị echiche na nhazi dị otú ahụ maka ọnwụ Ọnwụ ọ bụla, Miles na Corr kwenyere na nnọkọ Café “anaghị ekwu na ha na-egbo mkpa mmadụ niile, mana o doro anya na ọ na-ekwu banyere nchegbu nke ndị sonyere na ha” (2017: 162). Dabere na usoro ọmụmụ gbasara agbụrụ, Fong (2017) na-akọ na ọbụlagodi ndị bịara ọmụmụ ihe okpukperechi, ọtụtụ ndị si n'okpukpe dị iche iche nke Abraham, anaghị eme ntọghata. Ọnụọgụ ndị nwụrụ anwụ bụ otu ụzọ dị mma nke pọgatrị nke imeghari ihe niile sitere na ndụ niile. Ha juputara n'amamihe na onwu nke na - ahapu onwe ha site na ikwu okwu onwu.
Ebumnuche bụ isi nke Cafés, dị ka ihe dị ndụ na ndụ mmadụ na-agbanwe, bụ ịsọ mpi a na-eme gburugburu ma na-egbochi okwu ọnwụ. A na - ahụ ihe ngosi a ka ọ ghara imebi ya, ọ bụrụ na ọ bụghị imebi ya, ikike mmadụ nwere igosipụta ịdị adị nke onwe ya kpamkpam site na ịnakwere ọnwụ mmadụ n'ihe niile. Ma obu n’uzo iwu nke okpukpe na / ma obu ihe ime mo, iwu iwu na ihe agha jikere ejikere maka onwu, onwu na ihe ojoo site n’egwuregwu a ma ama ugbua, n’igbu egwu, onwu, enwere echiche di nkpa na “ezi onwu” bu ndabara ulo kwesiri ekwesi. Enwere ike mezuo ebumnuche a site na mkparịta ụka nke na - agụghị aha nke obodo ebe ndị bịaranụ na - anwa ịkọpụta nghọta ha na ụzọ ndụ ha nke na - ekwenye na ha nwụrụ. Agbanyeghị isiokwu ndị a kpọtụrụ aha bụ naanị ole na ole n'ime ọtụtụ akụkọ ndị Café na-ezukọ na nnọkọ ha, ntọala na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke Ọnwụ Café na-esite n'ịmepụta nkwukọrịta dị nsọ ebe enwere ike ịme mkparịta ụka banyere uru ọnwụ na-enwe maka ịkwalite ahụike. na-ele ndụ mmadụ na ọnwụ ya anya. Dị ka nke a, Ezubere Cafés iji zere itinye aka na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọdịmma onwe ya, "ịghara ime ya ma ọlị n'ihi ego" (Magra 2017). Ndị bịara nnọkọ enweghị ike ịkpọsa ma ọ bụ kwalite ọrụ ha na ọrụ nlekọta ọnwụ, ma ọ bụ ndị na-akwado okwukwe nwere ike ịga na-eme ntọghata. Enwere mgborogwu nke itinye aka na ọkwa ọha. N’ezie, iwepu onodu ndi mmadu (dika njedebe nke ndu n’onwe ya) na-adi na ndị nnọchianya na ndị na-akwado Café nabatara. Site n’iso ndị ị na-amabughị na-ezukọ iji kparịta ihe niile metụtara ọnwụ na ịnwụ, site n’ihe kacha taa akpụ na echiche onwe onye na echiche dị iche iche banyere ihe bụ ndụ dị mma na ọnwụ, ndị na-aga Ọnwụ Café na-egosi na ha na-eme onwe ha, ọ bụrụ na ọ bụghị ide ya, nke ha akụkọ dị oke mkpa na atụmanya gbasara ihe ndị metụtara ndụ. Ndị na-abịa Café na-akwadebekarị maka ọnwụ site na ịgagharị ihe ga-enyere ha aka ibi ndụ n'ụzọ zuru oke, ma ọ bụrụ na mmụọ ma ọ bụ ọnụ ahịa sitere n'ike mmụọ nsọ. Ndị bịara ọmụmụ ihe na-ahụ akụkọ ndụ nke onwe ha, mgbe a chịkọtara ha, ha nwere oke egwu nke ga-agbagha mkparị na okwu ọnwụ.
Ọtụtụ ndị na-abịa Café na-anụ ọkụ n’obi n’ịhụta ụzọ ndị ha dị na nghota. N’otu nnyocha nyocha, dịka ọmụmaatụ, ndị na - abịa Café, n’ihu ndị bịara abịa, na - eche ọnwụ na ịnwụ na mpụga nke usoro ọdịbendị nke onye ọ bụla: ụkọchukwu nọchiri anya shaman, ndị na - anwụ ọnwụ na - anọdụ ala site na onye otu Baha’i okwukwe na onye bụbu Christian Sayensị, ndị nne ka na-eru uju ọnwụ ụmụ ha na-eche na ụmụ nwanyị di ha nwụrụ na ndị dibịa afa (Fong 2017). Kpachara ike na uzo icho ma mezue nkwekorita ma oburu na odighi ekwenye na onwu di iche. N'ihi na Cafés Ọnwụ enweghị "echiche ma ọ bụ atụmatụ maka nnọkọ ahụ" dị ka ndị ọkà mmụta ihe ọmụma Lizzy Miles onye bidoro Café ọnwụ mbụ nke United States na Ohio na onye ọrụ ibe ya Maria Johnson na 2012, ndị bịaranụ nwere ihe ùgwù nke ịhụ akụkụ pụrụ iche nke ọha mmadụ na okwu nke aka ha dika ha na elekwasikwa anya na nkpuru ikpe azu nke ndu: onwu anyi (Miles and Corr 2017). Ọnwụ Cafés, n'ihi nnabata dị ukwuu nke mmadụ anyị na-ekerịta, bụ ndị a na-anabatakwa akụkọ banyere okpukpe, omume okpukpe, omume ekweghị na Chineke na ụzọ ime mmụọ anaghị akwado ma ọ bụ kwado otu nkuzi. Iji maa atụ, Fong (2017) na-akọ etu esi n’otu n’ime Ọnwụ Café onye isi ụlọ olili ozu nọ na mkparịta ụka miri emi ya na onye nwere ọnwụ nso, ebe nne nwa ya nwụrụ na onye nwụrụ ndụ kansa. na-ege ntị nke ọma. N’ebe ọzọ, otu dọkịta emepeere ndị na-ege ntị Café ụlọ ya ebe ya na ndị ozi ibe Café na-akparịta ụka mgbe ọ na-ekwu okwu.
Ọmụmụ banyere ọnwụ Cafés na mpaghara Los Angeles dị na California, United States, data data amamịghe gosiri na ndị bịaranụ na-echegbu onwe ha banyere nnukwu ụlọ ọrụ atọ nke ọha mmadụ na-ahụ na-adọpụ mmadụ na itinye aka na ọnwụ: "atọ n'ime otu" nke mgbasa ozi, ahịa. , na ọgwụ (Fong 2017). Atọ n’otu n’ime otua ka a na-emebi ọnwụ n’ọnwụ site n’amaghị oke mma na ịnụ ọkụ n’obi (media), site na commodification nke onwu (ahia), na imebi onwu na onwu n’ime onodu ogwu (ogwu). [Ihe onyonyo dị n’aka nri) N’enye ọkwa ụwa nke ọnwụ Cafes, mmadụ nwere ike iwepu na ihe omume ndị ọzọ gburugburu ụwa ga-ewepụta akwụkwọ ọgụgụ ndị ọzọ na - anwụ n’uzo ndị na-aga n’ihu na-emebi mgbidi nke okwu mkparịta ụka metụtara ọnwụ.
Ihe di nkpa banyere onwu ihe nlere bu onwu bu ka esi eme ka odi nfe site na echiche nke mmadu noo na acho ighota onodu mmadu nke n’adabere na onwu anyi. Ọ bụ mmegharị nke na-achọ itinye ihe ọ pụtara na ebumnuche ya iji gbochie ọnọdụ anyị ruo ọgwụgwụ nke ndụ. N’ihe metụtara nke a, ọ bụ mmegharị nke chọrọ iji zute ịtọgbọrọ nke ọgbụgbọ.
Mkpa iwebata uzo ohuru maka ijeghari njem nke mmadu di nkpa obughi odi nkpa nihi na ebumnuche na ezi uche, d’iche anya dika e kwesiri isi nye ulo oru ohuru a, ruru oke ha n’inuwa n’ime omimi ya na ihe omuma ya. Na narị afọ nke iri na itoolu, ọkà ihe ọmụma German Friedrich Nietzsche nwere mmetụta ndị a na visceral anya ma na-eche echiche mmadụ bụ ihe atụ, dị ka Richard Schacht nke Nietzsche si Ndi mmadu, mmadu nile, ka ga-enwe ike igosipụta acumen na nkwụsi ike gaba n'ihu ebumnuche na nzube site na ụmụ irighiri nke ndụ na ibi ndụ. N’echeghi ebum n’uche nke ebum n’uche, uhere nihilism jidere ma merie onye omee (Fong 2020). Maka Nietzsche, ịmara ihe banyere mmekọrịta anyị na nihilism na-enye anyị ohere ilepụ anya na ndagwurugwu nke nihilism ma teta site n'ihe ndọrọndọrọ miri emi, otu onye kwalitere ma nwekwuo ike site na njigide nke ọdịnala na ụdị ndị ọzọ nke ịchịkwa echiche na-eme ka anyị kwenye na ikwere na anyị anaghị anwụ anwụ (ma dabere na isi echiche ụfọdụ) anyị anaghị anwụ anwụ. Mgbe ahụ ọnwụ Cafés, ọ bụrụ na a na-ahụ ya site n'ọnọdụ dị adị, ọ bụ mmegharị mmekọrịta nke na-achọ imeri nhụsianya nke na-ebilite mgbe ndị na-eme ihe nkiri malitere 'iwere ihe' nke ndụ ha ruo na njedebe nke ndụ, ihe niile nke obodo ndị bịara abịa nwere otu ebumnuche: na inyefee nsogbu na okwu banyere ọnwụ anyị. N'akụkụ a, ihe omume Ọnwụ Café na-akọwapụta isiokwu nke mmụọ na nnwere onwe n'ụzọ n'ụzọ na-agaghị emebi echiche ọ bụla, n'ụzọ anaghị enye otu nkuzi.
Maka ụfọdụ ndị ọkà mmụta, nihilism nwere ezigbo ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, Donald A. Crosby kwuru na enwere ike ịhụ ịkpa oke dị ka ihe dị iche iche n’echiche n’oge anyị. Na agbanyeghi na mkpọrọgwụ nke nihilism dina “na mmalite nke oge a,” a na-ekwupụta nnupụta ya “na otu narị afọ gara aga karịchaa na oge kemgbe Agha Iwa Mbụ” ka a na-ekwukarị na ngosipụta nke ọdịnala (Crosby 1988: 5). Dika ọdịnaya n’egosi uzo esi n’echewa uwa nile, Crosby kowara nnonye di anya dika “echiche ndi mmadu dika okwu nzuzu” (1988: 30), ihe nlere anya n’ilehu dika ndu n’enweghi nsogbu ma obu ihe ekwesighi. . Maka Crosby, “ọ baghị uru ọ bụla, n'echiche nke na odighi izi ezi maka ndụ” (1988: 30). Site n'echiche dị otu a, naanị ebumnuche a ga-ekwe omume maka onye ọ bụla nke ghọtara ọnọdụ mmadụ bụ ịhapụ ebumnuche niile na ntinye mmụọ nke ịhapụ arụkwaghịm ebe anyị na-eche oge ikpeazụ na nnuku mbibi nke ndụ, na-ekpochapụ ọnwụ nke na-ehichapụ anyị nke ukwuu site na ebubo ahụ. ịdị adị ka ime ka ọ pụta na anyị ebighi ebi (Fong 2020).
Offọdụ ndị ha na Nietzsche dịkọrọ ndụ, dị ka Leo Tolstoy, agbakwunyere ọnọdụ a jọgburu onwe ya na nlele na-enweghị isi na nke nwanyị, nke ọnwụ Café na-anabatakwa ịgbanye:
Enweghị m ike inye otu ọ bụla ihe ọ bụla ma ọ bụ ndụ m niile ọ nwere nzube ọ bụla. . . . Taa ma ọ bụ echi ọrịa na ọnwụ ga-abịa. . . ndị m hụrụ n'anya ma ọ bụ m; Ọ dịghị ihe ga-adịgide ma ọlị. N'oge na-adịghị anya, a ga-echefu ihe omume m, ihe ọ sọkwara ha mee, m gaghị adịkwa. . . . Mmadu na ndu ya live diri ndu; ozugbo mmadụ mụbara anya, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụ na ọ bụ aghụghọ na nzuzu nzuzu (edepụtara na Crosby 1988: 31).
Mgbe ahụ ọnwụ Cafés, bụ nke ikpeazụ, bụ ọrụ obodo bụ ebumnuche ịchọpụta na iwepu ọnọdụ ndị na-eduga enweghị mmasị na oke dị otú ahụ n'otu mmadụ si achịkọta ọnọdụ ime mmụọ, usoro, na ọbụna sayensị.
Ihe a na-emekarị bụ ndị nwere mmasị ịga Ọnwụ Cafés bụ ka ha buru ụzọ gaa na saịtị ha ọnwụcafe.com. Weebụsaịtị a na-enye maapụ mmekọrịta nke dị puku kwuru puku Ọnwụ Café dị n'akụkụ ụwa niile. Onyonyo ọ bụla dị na maapụ mmekọrịta na-enye avatar nke enwere ike ịpị. A ga-akọwa ozi gbasara Café Ọnwụ ahụ ọfụma.
Site na nke a gaa n'ihu, ndị nwere mmasị na-akpọtụrụ onye ọbịa ozugbo maka ozi ndị ọzọ. Ihe ekwesiri ilebara anya bu ike nke uzo ekwuru n’iru iji bulite onwu Cafés. Social media bụ n'ezie ụzọ dị mkpa eji ekwuputa ihe omume Café ma nwee ndị na-eleta Café na -abakarị ụzọ mgbasa ozi, dị ka usoro mgbasa ozi. Ọzọkwa, n’okpuru ike Jon Underwood na acumen ya maka iji sistemuzụ dị na ntanetị rụ ọrụ n’ihi usoro ngwanrọ mmepe ya, mmadụ ga-ekwenye n’ezie na ọ bụ mbọ nkwado Underwood bụ nke nyere aka n’ịgbasa ozi Café n’ụwa niile , na ntughari uche banyere ikike ya ịrụ ọrụ dịka mgbanwe na ụwa na - agbanwe agbanwe.
Na nmalite ya na Paris yana n'okpuru nduzi nke Dr. Crettaz, a na-ejidekarị ebe egwuregwu Café, ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ ahịa kọfị. Ma ụdị ọnọdụ a aghọọla nnukwu ihe n'ụzọ siri ike: gburugburu ụwa ugbu a, enwere imirikiti ebe ndị ọzọ ebe a na-eme ihe Café. Ndị nwere ụlọ oriri na ọ regardụ Cụ Café na nke a nwere nnukwu nnwere onwe. Ewezuga ebe a na-ere kọfị kọfị, ọtụtụ ememme emeela n'ụlọ ụka, n'ụlọ nsọ, ebe a na-ere nri, na ọbụnadị ụlọ nke ndị bi ebe ụfọdụ chọrọ isonye na ndị Café. Gburugburu ụwa, o yiri ka a na-ejikarị Cafes ebe a na-enwe “ọpụpụ” ọbụna karị ebe a na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya banyere okwu ọnwụ. Ọbụna na United States, enwere ebe egwuregwu pụrụ iche ebe a na-enwe nzukọ Café. Fong kwuru otu oge n’ime nleta nyocha ya na Cafes ọnwụ, dịka ọmụmaatụ, otu n’ime ndị ama ama ndị nnabata Los Angeles, Betsy Trapasso, MSW, mere emume na Joshua Tree National Park, ogige ntụrụndụ mba ama ama na gburugburu obibi dị n’ọzara dị. dị nso na Southern California. Ihe di iche iche banyere otu esi ahazi onodu ihe nlele Café di otutu ma dabere na ihe onye choro ma obu ndi sonyere ha choro.
Na agbanyeghị na gburugburu ebe obibi, enwere ụfọdụ usoro dị mkpa ga-amalite ihe omume Café. Ndị na-eme kafe na-abịa, mgbe a na-edebanye aha, na-abịakarị n'isi oge ma soro ndị nnọchi anya ibe ha nwee obi ụtọ. Ndị na-abịa Café na-abịa ịnụ ọkụ n'obi ma nwee mmasị; ndị ọzọ na-abịa site na oke ụjọ na ụjọ. Maka otu ikpeazu, ịghachị ịmụmụ ọnụ ọchị na ịdị mma nke obodo na-eme ka e nwee usoro nnabata ọ bụla. Ihe omume ụfọdụ na-anabata ọtụtụ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, Cafés ọnwụ na-abụkarị n'ụlọ nri, n'obere obodo, ma ọ bụ n'ebe ofufe, ebe a na-eme nnukwu ìgwè n'usoro tebụl ụfọdụ. Aflọ ndị ọzọ dị na Canté dị omimi ebe ndị ọbịa / ndị ọbịa chọrọ karịa mana mmadụ ole na ole bụ ndị ọbịa iri na abụọ, na ihe omume ụfọdụ ndị na-abịa ọkara iri na abụọ bịara. N'oge a kara aka, ndị ọbịa Café ga-ewebata onwe ha n'ihu ndị ahụ gbakọtara ma kọwaa ebumnuche nke Ọnwụ Cafés. A gwazie ndị bịara ka ha gosipụta onwe ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị mmadụ na-ahọrọ ịkọwa ọrụ ha, ndị a na-emebeghị ka bụ ndị a gaghị agwọ. Ndị sonyere ghọtara na njirimara zuru ezu adịghị mkpa ma na-arịọ ndị mmadụ ka ha jiri aka ha mara aha ha. Ọtụtụ na-eji ohere dị otú ahụ akọwapụtakwa nzube maka nleta ha, ọ bụkwa n'ọnọdụ ndị a ka a na-egosipụta “ọmarịcha” okwu ọnwụ mgbe a na-ejikọtakarị ihe ọla kọpa na iko, ekele ndị na-agbaji ice, na mmechi. nọdụ ala makana Café na -ewere nri mkpịsị aka aka ha, ha niile na-ekwupụta mkpali dị ala nke na-akọwa ọnọdụ a ga-eme.
Mgbe onye na-ahazi Café webata ihe omume na ndị bịaranụ, mkparịta ụka ndị ahụ na-amalitekarị, n'ụzọ na-enweghị isi. Nke a bụ ihe a ga-atụ anya ya ebe ụfọdụ ndị bịaranụ ejibeghị oke “na-achọpụta” ibe ha, ebe ndị ọzọ na-eche onye ga-emecha mebie ice iji bido ikwu okwu ọnwụ. N’enweghi ike, onye n’atụghị egwu maka nnwere onwe ọhụrụ a ga-amalite mkparịta ụka abalị. Iju mmiri ahụ megheere ndị ọzọ, okwu ọnwụ na-aga n'ihu. Site na oge a, ndị ọzọ sonyere na-ekwupụta ahụmahụ ha banyere ọnwụ, echiche na-ekerịta, ịkwa arịrị wee nata nkwado. A na-ekpughere ndị mmadụ na-eru uju n'ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ na ụzọ dị iche iche na -echeta ọnwụ, n'agbanyeghị isiokwu ndị a na / ma ọ bụ ụzọ ọ bụla. Adị usoro a dị ka “ọkwa” ozugbo na ọha ọhaneze, na-enye ohere ịkọ akụkọ ọdịnala na ọdịbendị sitere na ụdị ndụ niile iji bụrụ ndị enweghị mmekọrịta n'etiti ọha na eze. Ebe nri dị mma, ihe ọ pastụ pastụ, na ihe ọ beụveraụ ndị dị ka kọfị na tii hibere, ndị na-aga Ọnwụ Café na-ekwurịta usoro ha maka ọnwụ nke onwe ha dịka obodo. Ndị obodo na-ezukọta nkwanye ugwu n'ụlọ nri, ebe ofufe, ma ọ bụ n'ụlọ na-anabata ọha mmadụ n'ụzọ na-eme ka mmekọrịta dịrị n'otu, n'ụzọ na-eme ememe mmekọrịta mmadụ na ibe anyị. Ka mkparịta ụka na-aga, ndị nnabata / ndị Cafés na-echekarị maka ngwa ngwa, mgbanwe otu, na mkparịta ụka, na-enye ha ohere iwepụ nkwụsị. N'ọtụtụ oge mgbe etolite usoro nkwukọrịta dị otú a, ndị na-ege ntị na-agakọ na ịkọ akụkọ ma gaa n'ihu na mkparịta ụka ahụ; ha na-anabata onye na-esote onye na-esote ịmalite mkparịta ụka ọhụrụ ma ọ bụrụ na onye bụbu ọkà okwu kwubiri ịkekọrịta echiche ha na ahụmịhe nke mere ka ha chee ọgụ na ọnwụ. A na-enwe nghọtahie mgbe niile, mana ha dị ùgwù ma na-akwanyere ugwu.
Gburugburu ebe obibi mmadụ nwere ntụsara ahụ, ọ na-enwekarị mmụọ miri emi, na-ejupụta na uru, yana dị ka amaokwu ndị bu ụzọ, na-enwekarị obi. Ọnụnọ ụlọ ndị nwụrụ anwụ anaghị enwe obi mgbawa. Ọzọkwa, okwu ọnwụ anaghị abụkarị ihe egwuregwu n'ihi ịnabata ya ọchị. Oge nwere obi anaghị eme ka okwu dị omimi dị n'etiti ndị bịara (Fong 2017). N’ezie, iberibe ngwongwo a na-agbadata oge na-agakọ mkparịta ụka nke mkparịta ụka, na-akwụsị n'ụzọ na-eme ka okwu dị arọ ghara ịdị. N'ihi na ọchị nwere ebe dị mkpa na ọnwụ, iru uju na iru uju ma ọ bụrụ na ndị sonyere na-eche ọnwụnwa dị iche iche ghọtara ọdịnala ọdịbendị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye isi na-elekọta mmadụ. DeSpelder and Strickland (2009) kọwara nke a dịka “mmanụ nke ọha.” Inwe ezi uche na ọnọdụ nke ọnwụ na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwụkọta ọnụ. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ọtụtụ oge obi nwere na ihe omume Café, ọtụtụ ihe agbanwere bụ ihe siri ike ma dị omimi n'ihi ịdị iche iche nke nchegbu ụfọdụ ndị na-abịa Café gosipụtara. Mkparịta ụka Café na-egosipụta ọkwa dị omimi nke na-adọta ndị bịaranụ. Nke a na - eme, ma ọbụghị na a ga - enwe nzukọ nke uche, mgbe ahụ n'ihe banyere nnabata okwu okirikiri kwupụtara n'okwu onye na - ekwu okwu (ya bụ, asụsụ na ntụgharị ga - eduga na onye na - ekwu okwu, anya na - ekwu okwu bụ eziokwu, dị ka a na - ahụ anya dị anya site na ndị bịaranụ were ihe dịịrị onwe onye). Ka o sina dị, usoro dị iche iche nke iche ọgụ ọnwụ na Ọnwụ Café na-emepụta obodo na-enyere ndị bịaranụ aka ịnagide ọnwụ, iru uju na iru uju, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị bịara abịa abụghị ndị ọbịa. N’ezie, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị bịaranụ agaghị ahụ ibe ha ọzọ ozugbo Café kwubiri.
Ọnwụ Jon Underwood nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri anọ na anọ site na ọgbụgba ụbụrụ nke na-esite n'ọrịa ọgbụgba na-arịa nnukwu ọrịa emebighị uto nke mmegharị ahụ. Na mpaghara London, ndị mmekọ Underwood na ndị otu ezi na ụlọ gara n'ihu na -anọ ihe nketa ya. Dika onwu anwu bu ihe nlebara anya nke choputara n’obodo otutu uwa dum, nhazi ya nke oma banyere otu ahu adighi enwe nmekorita nke ndi n’enweghi nsogbu na obodo n’obodo n’uzo uzo. kwekọrọ na ikike ọdịbendị. Agbanyeghị Ọnwụ mmanya dị gburugburu ụwa na-eme ka ndị bịaranụ nwee ahụ iru ala n'ihi ahụmịhe iri nri ya, atụmatụ dị mma maka ndị nwere ike ịchọrọ ị nweta ọitesụitesụ ole na ole ma siụọ mmanya ha mgbe ndị enyi ọhụrụ ha na-agafe ịkọ akụkọ ha. , enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche etu esi ahazi ebe ọ bụla ga - eme. N'akụkụ a, enweghị ezigbo onye ndu ma ọ bụ ìgwè ndị isi egbochibeghị nzube ahụ. Kama, nhazi na oge nhazi nke ihe omume, etu ihe omume si dị, ugboro ole ijide ihe omume, bụ nke ndị nwụrụ anwụ / onye na-eme ihe nkiri Ọnwụ Café. Ọzọkwa, ọnụnọ webụsaịtị Weebụ Café nke na-akwalite okwu ọnwụ, enyerela ndị nwere mmasị aka ịga n'ihu na-aga n'ihu na-eme ka okwu ọnwụ ahụ wee mepụta ọnọdụ "n'elu ala" nke ga-enye ohere maka Okwu ọnwụ a na-edeghị ede, nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe anyị bụrụ nke obodo na nke ụwa niile. N'akụkụ a, Ọnwụ Cafés achọtawo mkpọrọgwụ n'obodo ndị ga-enwe mmetụta na-adịgide adịgide ruo ọtụtụ afọ na-abịanụ, ha niile na-ejigide etiti na ike ndọda na-agbadata ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị a, n'agbanyeghị na enwere oke iche na etu mpaghara ọ bụla nwere ike isi haziri:
Mgbakọ kafe dị ihe dị ka awa abụọ ruo atọ n'ogologo. A na-ahazi ha n'oge mgbede ma ọ bụ n'uhuruchi (na ijikwa oge ọnwụ Cafés ruo ikike nke ndị ọbịa / s).
Ogo nke ọ bụla Ọnwụ Café na-agbanwe. Ihe omume ụfọdụ nwere ndị na-erughị ọkara iri na abụọ ebe ihe ka ọtụtụ nwere opekata mpe. N'agbanyeghị nke ahụ, Cafés ndị ọzọ nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị mmadụ, na-achọ ka e kee ndị bịara ya ụzọ dị iche iche nọ na tebụl dị iche iche.
Dabere na mmasị nke onye ọbịa ahụ, enwere ike ịme emume Café ugboro ugboro n'otu ebe ma ọ bụ ịdị iche na ọnọdụ ebe ịnọ.
Otu n'ime ndị ọbịa kachasị ewu ewu nke Ọnwụ Cafés na Mpaghara Greater Los Angeles n'oge nyocha Fong bụ Betsy Trapasso, MSW. Echiche ya maka ịhazi ihe Ọnwụ Cafes na-egosi ọmarịcha nke ndị ọbịa / ndị na-eme ka ndị ọbịa dị iche iche gosipụtara n'ịhazi ihe omume. O kwuru otu esi:
Ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwerịrị otu ebe, ma jide Café na Mọnde mbụ nke ọnwa ọ bụla, n'otu oge. Ọ masịrị m ịpụ na ịnwale ọnọdụ ndị a niile dị iche iche - ebe edozighi ihe ọ bụla, nke bụ ọrụ siri ike mana m nwere mmasị na ya. Just maghị ihe ị ga-enweta. Abụ m otu n’ime ndị na-amachibidoro ndị bịaranụ aka 10. Ọ dị gị ka ị na-amakwu onye ọ bụla ọzọ (Fong 2017: 24).
Betsy kwukwara, sị:
Anaghị m enwe nnukwu ma ọ bụ naanị obere obere. Enwere Cafés ọnwụ nwere mmadụ 60, ụfọdụ nwere mmadụ iri anọ. Enwere m mmasị na mmetụta nke otu obere, nwere mmekọrịta chiri anya, ọ bụ ya mere m ji amachi ya mmadụ 40-9 ma ọ bụghị na ị maara na otu tebụl na ị na-ele anya na tebụl ọzọ ma ha na-achị ọchị na tebụl gị na-agwụ ike ma ị na-eme ya. na-anwa ige ntị n'ihe ndị ọzọ na-ekwu. Mana otu a ọ dị mma, pere mpe, ma na-akpachi anya na onye ọ bụla nwere ike ikwu okwu tupu oge gafechaa. Yabụ na nke a bụ naanị n'echiche m, ka ị ghara ịdọpụ uche na onye na-akparịta ụka n'okirikiri (Fong 10: 2017).
N’ihota ewu ewu na ogbaaghara nke Cafés n’uwa n’uwa, ihe agha ohuru nke nhazi agha aghaghi iputa. N'akụkụ a, Cafés Ọnwụ ka na-emeghe emepe emepe ha. Nkọwa usoro dị iche iche na-eme ka ndị na-ege ntị na-ekwu okwu banyere ọnwụ ha na-aghọ ihe na-enweghị isi nyere aka na uru ndị na-apụta na Cafés ọnwụ niile.
Cafés Ọnwụ anwụ nwere nsogbu na nsogbu. Ndị ahụ ga-ebilite ga-ewere ọnọdụ n’ebe ọgbakọ kachasị dị. Nyere na Cafés Ọnwụ anaghị akọ onye ọ bụla ọnọdụ ha nke ọma ma ọ bụ na webụsaịtị ọ bụla, ma ọ bụ na gburugburu ọ bụla mepere emepe, enweghị ibu ọrụ dị elu nke na-eme ka ndị mmadụ choo usoro. Cafés Ọnwụ bụ ihe omume obodo emere iji weta ndị mmadụ jikota onu (ya na nri na onunu, mgbe mgbe); costskwụ ụgwọ dị ka ndị na-emetụta arụmọrụ azụmahịa anaghị adị. Nke ahụ kwuru, enwere otu okwu: [Ihe osise dị n'aka nri] ma ndị nwere mmasị na ndị nkịtị obodo nwere ike ịchọta ebe ha ga-aga. Cafés nwụrụ anwụ, ọ bụrụ na ha nwere ọ chaụ na ndị ọbịa a ma ama, ọ ga-adọta ndị ga-ege ntị na mpaghara ndị dị anya. Otu ihe ga - esi na ụdị omume a pụta bụ na ụfọdụ Cafés ga - enwe ndepụta echere maka ndị ọbịa nwere mmasị, na oge nchere ụfọdụ nwere ike ịdịru otu ọnwa ma ọ bụ karịa. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị Cafés na-arụ ọrụ karịa, yana ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ nwere ike ijikwa, nke a na-eme ka obi dị gị ụtọ na mkpirikpi a, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzukọ dị ka ndị na-achọ ịdị mma nke ọnwụ: ịnwụ n'udo nkwanye ugwu, putara na nnabata.
Onyonyo # 1: Switzerland sociologist na ọkà mmụta gbasara mmekọrịta mmadụ na nwanyị Bernard Crettaz.
Image # 2: akpati ozu ngwa ngwa na Costco.
Foto # 3: Ebe ihe na-anwụ Café gburugburu ụwa, dịka 2020.
Foto # 4: Mpempe akwụkwọ Café ọnwụ.
** Ọ gwụla ma akọwapụtara ya, ihe dị na profaịlụ a dabere na Jack Fong, Ọnwụ Ahụ nke Café: ịgagharị ebe obibi ọnwụ. London: Palgrave MacMillan, 2017.
Crosby, Donald A. 1988. Onye na-ahụ ihe ngosi nke Absurd: Isi mmalite na nkatọ nke Nihilism nke Oge A. Albany: University University of New York Press.
Weebụsaịtị Deathcafe. “Nabata na Kafe Ọnwụ.” E si na http://deathcafe.com/ na 19 December 2015.
DeSpelder, Lynne Ann, na Albert Lee Strickland. 2009. Egwuregwu Ikpeazụ: conweta ọnwụ na ịnwụ. New York: Mmụta dị elu nke McGraw-Hill.
Fong, Jack. 2020. Iji Nrụpụta Sociological Nietzsche. Lanham, MD: Akwụkwọ Lexington.
Fong, Jack. 2017. Ọnụọgụ ndị nwụrụ ọnwụ: ịgagharị ebe obibi ọnwụ. London: Palgrave MacMillan.
Magra, Illiana. 2017. “Jon Underwood, Onye hibere Ọnwụ Ọnwụ, Nwụ na 44.” New York Times, July 11. Nweta site na https://www.nytimes.com/2017/07/11/international-home/jon-underwood-dead-death-cafe-movement.html na 23 February 2018
Miles, Lizzy, na Charles A. Corr. 2017. "Kafe ọnwụ: Gịnị Bụ Ihe Anyị Pụrụ Itmụta Site na Ya." Omega — Akwụkwọ Ọnwụ na Ọnwụ. 75: 151 – 65.